WASIIR SACAD CALI SHIRE OO HADAL KA JEEDIYAY GOLAHA DARAASAADKA IYO FALLANQAYNTA SIYAASADDA EE CHATHAM HOUSE | Maalmahanews
WASIIR SACAD CALI SHIRE OO HADAL KA JEEDIYAY GOLAHA DARAASAADKA IYO FALLANQAYNTA SIYAASADDA EE CHATHAM HOUSE
April 19, 2018 - Written by admin
Wasiirka arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Somaliland Dr Sacad Cali Shire ayaa khudbad ka jeediyay golaha daraasaadka iyo falanqaynta siyaasadda ee Chatham House halkaas oo lagu casuumay. Wasiir Sacad oo si guud uga hadlay xaaladda Somaliland waxa uu ka hadlay xidhiidhka dalalka dariska, xidhiidhka Somaliland iyo Khaliijka iyo wada hadalka Somaliland iyo Soomaaliya.
“Dawladda Somaliland waxay cashuur ka qaadda dekedda Berbera waxaana loo isticmaala adeegyada bulshada loo qabanayo taas oo faa’iido u ah dhammaan dadweynaha,” Sidaas ayuu yidhi Wasiir Sacad oo sheegay in ay Somaliland ka mid tahay dekedaha ugu muhiimsan ee ah marin laga galo suuqa dalal ay ku nool yihiin 176 Milyan oo qof.
Wasiirku wuxuu sheegay in ay heshiiska Dp World ee dekedda ka rajaynayaan shaqo abuur “Waxaanu rajaynayna in heshiisyada dekedda Berbera wajiga hore ee dhismaha fursado shaqo abuuri doonan, sidoo kalena ay kordhin doonan shaqooyinka saanadda iyo isu socodka ka gooshaya alaabta badan ee mari doonta awgeed,” Sidaas ayuu sheegay Dr Sacad.
Wasiirku waxa kale oo uu ka hadlay xidhiidhka Somaliland la leedahay dalalka Carbeed waxaanu sheegay in Somaliland xidhiidh ganacsi iyo mid siyaasadeed oo xooggan la leedahay dalalka Khaliijka kuwaas oo salka ku hayo dano wadaag ah “ 80% waxa aanu dhoofino waxaanu gayna Sucuudiga, 20% waxaanu gayna Yemen, Inta badan waxa aanu soo dejisana waxay ka yimaaddaan Imaaraadka,” Sidaas ayuu yidhi wasiir Sacad.
Wasiirku waxa kale oo uu sheegay in ay doonayaan in Somaliland xidhiidh wanaagsan la yeelato Soomaaliya sida Jabuuti iyo Itoobiya. Waxa uu sheegay in wada hadalladii uu Turkigu fududaynayay aan la joojin laakiin, dib loo bilaabi doono marka ay habboonaato.
“Hiigsigayaga Qaranku waa in aanu aragno dal degan, dimuqraadi ah oo hodan ah oo tayada noloshu sarrayso. Hiigsiga Gobolku waa in la helo dalal qoys ah oo Geeska Afrika ah oo dhaqaalahoodu midaysan yahay,” Sidaas ayuu yidhi wasiir Sacad.
Waxa uu sheegay in Somaliland hormuud ka tahay dimuqraadiyadda gobolka “Somaliland waxay calanka u sidaa dimuqraadiyadda gobolka. Waxay qabatay lix doorasho ilaa 2002, waxaanay door muhiim ah ka ciyaarta ammaanka iyo degenaanshaha gobolka,” Sidaas ayuu sheegay Dr Sacad.
Wasiir Sacad ayaa sidoo kale sheegay in shirka waddamada Barwaaqo Sooranka ee Ingiriiska ka socda ku qalqaalinayo sidii loo ogolaan lahaa xubinimada Somaliland maaddaama ay buuxinayso shuruudaha lagu galo. Commonwealths-ka ayaa ah dalalkii Ingiriisku gumaystay oo Somaliland-na ahayd maxmiyad Ingiriiska hoos tagta.